သွေးအုပ်စုအလိုက် သောက်သင့်သည့် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း
၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ အိုသွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင် ကျန်းမာစေဖို့ ပူဒီနာ(ပူစီနံ)လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ ချင်း (ဂျင်း)လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ ဂျင်စင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်တို့ကို သောက်ရပါမယ်။ အေသွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင် ကျန်းမာစေဖို့ ချမိုမိုင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ စပယ်ရနံ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်နဲ့ စမုံစပါး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတို့ကို သောက်ရပါမယ်။ ဘီသွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင် ကျန်းမာစေဖို့...
လိင်စိတ်လျော့နည်းတယ် . .
မေး. ကျွန်တော့်အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ရှိပေမယ့် လိင်မှုကိစ္စကို စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒီအတွက် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ကိုသတိုး၊ သမိုင်း။ ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး (ငြိမ်း)၊ စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားသည် ဖြေ. ဒါတွေက...
ကြက်သံပရာပေါင်းစားရင် ဆီးချိုရောဂါ ပျောက်နိုင်သလား . . .
မေး. ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သတင်းတစ်ပုဒ် တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ လူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့မှာ နေမကောင်းဖြစ်သတဲ့။ သူဟာအာတွေခြောက်ပြီး အမြဲရေဆာ၊ ထမင်းလည်း အမြဲဆာနေသလို တုန်နေသတဲ့။ချွေးစေးတွေ ပြန်၊ ဆီးကခဏခဏသွားတာနဲ့ ဆရာဝန်ပြပြီး စစ်ဆေးကြည့်တော့ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ဆေးစားလာတာ ၂ နှစ်လောက် ကြာပါတယ်။ အသက်...
အမဲသားအစိမ်းစားလေ့ရှိသူ၏ ၀မ်းဗိုက်အတွင်းမှ ပေ ၂၀ ရှည်သော တုတ်ပြားကောင်တွေ့ရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမဲသားအစိမ်းစားသောက်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လုံးလုံး နာတာရှည်ဝမ်းဗိုက်အောင့်တဲ့ ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်မျိုးစုံကို သွားရောက်ပြသခဲ့ရာမှာ သာမန်ဝမ်းဗိုက်အောင့်ဝေဒနာအတွက်ပဲ ကုသပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မကြာသေးမီက ၃ရက်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၂၂ ပေါင်ကျဆင်းသွားပြီးနောက် ဆရာဝန်တွေဆီ သွားရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးနောက်...
၊ လရိပ်မေ ၊ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းကို အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းလို့ လူသိများပြီး အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း ချို့တဲ့သွားတတ်တဲ့အတွက် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ သဘာဝအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသင့်ပါတယ်။ – မြေပဲ မြေပဲမှာ ဖိုင်တိုအီစထရိုဂျင်ဖြစ်တဲ့ လစ်ဂနင်ဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။...
တွဲစားခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပိုရစေနိုင်သည့် အစာများ
တချို့အစာတွေက တွဲဖက်စားလိုက်ရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် အောက်ပါအစာတွေကို တွဲဖက်စားရင် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထောပတ်သီးကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့တွဲစားဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းနဲ့ ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ သရေစာအနေနဲ့ ထောပတ်သီးဖျော်ရည် သောက်ပေးရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး+ ထောပတ်သီး ခရမ်းချဉ်သီးမှာ...
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဝေးလံတဲ့အရှေ့မြောက်အရပ်မှ မော်လင်းနွန်ကျေးရွာကလေးဟာ ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ထားပြီး သစ်ပင်ပန်းမန်တွေနဲ့ အေးချမ်းလှပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ လာရောက်လည်ပတ်သူမရှိဘဲ ရွာကိုသွားရာ ကားလမ်းမရှိ၊ ခြေလျင်သာ သွားရောက်နိုင်တဲ့ ဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တန်းတွေအကြားမှာ တည်ရှိပြီး လူဦးရေ...
နွေကာလတွင် လိုက်နာသင့်သည့် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းများ
လရိပ်မေ နွေကာလမှာ အသားအရေက နေလောင်ဒဏ်နဲ့ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှု ဒဏ်တွေကြောင့် နွမ်းနယ်ထိခိုက်မနေဘဲ ကြည်လင် တောက်ပ နေစေဖို့ အောက်ပါ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) သန့်ရှင်းမှုကို အလေးထားပါ မျက်နှာမသစ်ခင် လက်တွေကို ဆပ်ပြာ အပျော့ စားနဲ့...
ဆံပင်ကျွတ်နှုန်းများတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာကြည့်ရအောင်
လရိပ်မေ သင့်ဆံပင်တွေ ကျွတ်နှုန်းများနေသလား။ ဆံပင်ကျွတ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၅မျိုးရှိတဲ့ အတွက် သင်ကဘယ်အချက်ကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာသိအောင် လေ့လာကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါ တယ်။ (၁)- စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း (၂)- ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း (၃)- ဗီတာမင်အေ အလွန်အမင်းမှီဝဲခြင်း (၄)- ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း...
ဥာဏ်ရည်မမီပေမယ့် စွမ်းရည်ပြခွင့်ရပြီလေ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ သားသမီးလေးဦးမှာ သူကတတိယသားပါ။ မွေးတုန်းက ၈၈ အရေးအခင်းမှာဆိုတော့ ကလေးမွေးရတဲ့အခြေအနေကလည်း နယ်အိမ်မှာပဲဆရာမနဲ့ မွေးရတယ်၊ မွေးရာပါစအိုမှာ အပေါက်မပါဘူး၊ အဲဒါကိုနောက်နေ့တွေမှာ ကလေးက နောက်ဖေးမသွားပါလား . . မသွားပါလားဆိုကာမှ စအိုအပေါက်...
Page 508 of 593« First‹ Previous504505506507508509510511512Next ›Last »